Ny fangatahana asa nataon'i Steve Jobs dia mihantona amin'ny $ 174.000 | Avy amin'ny mac aho
Iray volana latsaka lasa izay, nanako ny vaovao mifandraika amin'ny a varotra varotra vaovao nosoniavin'i Steve Jobs. Tamin'ity indray mitoraka ity dia fangatahana asa, ny boky torolàlana ara-teknika OS X ary fametahana gazety izay nisehoan'i Steve Jobs mampiseho ny iPhone 3G, tamin'ny fotoana iray nandritra ny fampisehoana.
Ireo entana rehetra ireo dia efa natao lavanty tamin'ny fangatahana asa vita ary nosoniavin'i Steve Jobs, izay nahatratra tarehimarika ambonimbony kokoa $ 174.000. Ity fangatahana asa ity dia ny vokatra misy ny vidiny avo indrindra: 50.000 XNUMX $.
Ny boky torolàlana ho an'ny mpampiasa OS X dia ny vokatra nahatratra ny laharana teo amin'ny vola azo tamin'ny varotra nahatratra $ 41.000, raha ny fanapahana gazety, izay nosoniavin'i Scott Forstall ihany koa, izay niaraka tamin'i Steve Jobs tamin'io fotoana io dia nangataka azy ireo hanasonia azy io noho ny kafe ary fepetra tsy maintsy atao raha te-hanasonia an'i Steve Jobs ny mpankafy, efa saika $ 27.000.
Tao anatin'izay taona vitsivitsy lasa izay dia lasa asa tena mora mitady ny vokatra mifandraika amin'ny Apple amin'ny lavanty, noho ny fisarihana izay tohizan'ny tarehin'asa. Fa raha miresaka autografes isika dia mety hipoitra ilay teo aloha satria i Jobs dia tsy naman'ny fanaovana sonia autographe, satria nanamafy hatrany izy fa tsy miankina aminy irery ny asan'ny orinasany, fa misy ekipa manan-danja ao ambadik'izany. Porofon'io eritreritra io dia hita tao amin'ny fametahana gazety izay nanery an'i Scott Forstall, rain'ny iPod, hanasonia, izay natao lavanty tamin'ny $ 26.950.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Ny fangatahana asa nataon'i Steve Jobs dia mihantona amin'ny $ 174.000